ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်ရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ မိန်းမလှကျွန်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောဝန်ထမ်းများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတောရိုင်း တိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့( FFI )မှ ဂျာမဏီနိုင်ငံသား ငှက်ပညာရှင်(၂)ဦးနှင့်အတူ မိန်းမလှကျွန်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောနှင့် အနီးဝန်းကျင် ဧရိယာများ(ဂယက် ကြီးကျွန်း၊ ငါးမန်းသောင်၊ ကတုံကလေးကျွန်း၊ ကျွန်းသာယာ)တွင် ငှက် မျိုးစိတ်စာရင်း ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကို (၄-၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့မှ (၇-၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရသည်။
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတို့တွင်တရားမဝင် သစ်များဖမ်းဆီးရမိ
(၂၉-၃-၂၀၁၄)ရက်နေ့မှ(၄-၄-၂၀၁၄)ရက်နေ့အထိပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများနှင့်နေပြည် တော်ကောင်စီနယ်မြေတို့တွင် တရားမဝင်သစ် ဖမ်းဆီးရမိမှုများမှာ ကချင်ပြည်နယ်တွင် တရားမဝင်ကျွန်းသစ်(၀.၇၈၆၀)တန်၊ သစ်မာ(၁.၈၃၄၀)တန်၊ အခြားသစ်(၆.၉၅၂၀)တန်၊စုစုပေါင်း (၉.၅၇၂၀)တန်၊ ချင်းပြည်နယ်တွင် တရားမဝင်သစ်မာ(၂.၈၆၈၂)တန်၊ အခြားသစ်(၁.၃၆၈၄)တန် ၊ စုစုပေါင်း(၄.၂၃၆၆)တန်နှင့်တရားခံ(၃)ဦး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် တရားမဝင်ကျွန်းသစ် (၃၇.၀၉၇၀)တန်၊ သစ်မာ(၃၄၂.၀၈၄၂)တန်၊ အခြားသစ်(၃၁.၅၃၄၄)တန်၊ စုစုပေါင်း(၄၁၀.၇၁၅၆) တန်
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၌ သင်္ကြန်ကာလအတွင်း တရားမဝင်သစ်များ ဖမ်းဆီးရမိ
မြန်မာနိုင်ငံသည် အဖိုးတန်သယံဇာတများဖြင့် ပေါကြွယ်ဝလျက်ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ် ပြီး နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူလူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများအတွက် အဆိုပါသယံဇာတများအား ထိရောက်စွာ အသုံးချ၍ ဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ အဖိုးတန်သယံဇာတများဖြစ်သော သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်း များကို ဝိသမလောဘသားများ၏ ခိုးထုတ်သယ်ယူနေခြင်းများမှကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် ဖမ်းဆီး အရေးယူမှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်
(၁၅.၄.၂၀၁၄) ရက်နေ့ (၂၁:၀၀) နာရီအချိန်မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင် လမ်း၊ အေးရှားဝေါလ်တိုးဂိတ်အနီး ခမ မပည 93 C / 5F 763502 ၌ ဖမ်းဆီးရမိသည့် တရားမဝင်တမလန်းများ တင်ဆောင်ထားသော သင်္ကြန်အလှပြယာဉ
တရားမဝင်သစ် ဖမ်ဆီးသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၅-၄-၂၀၁၄ ရက်နေ့ ည(၂၁:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ခရီးသွား လာခြင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အမည် ဖြင့်သင်္ကြန်အလှပြယာဉ်များတွင် တရားမဝင် တမလန်းသစ်များ သယ်ဆောင်လာကြောင်း သတင်း ရရှိသဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးဝင်းနိုင်-၄၊ မန္တလေးခရိုင်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးသိန်းတိုး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရှိ ဦးတင့်ခိုင်၊ ဦးစီးအရာရှိ ဦးကျော်ဇင်ထွန်း အပါအဝင် (၁၁)ဦး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအုပ် ရဲမြင့်၊ ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ်၊ အုန်းချော ရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒု-ရဲအုပ် အောင်အောင် (လ-၁၉၂၈၅၂) အပါအဝင်(၄)ဦး
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများစုံလင်စွာ တည်ရှိနေခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်အား ပြီးပြည့်စုံ ကောင်းမွန်စေ၍ လူသားတို့အတွက် အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်နှင့် နေထိုင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ကိုပါ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ရေရှည်ထောက်ပံ့ပေးစေနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာ၀ဂေဟစနစ် ကွဲပြားမှု များပြားသည့်အလျောက် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများလည်း ပေါကြွယ်ဝသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ် ပါသည်
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံအဆင့် အစီရင်ခံစာ ရေးသားပြုစုခြင်း
၁။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ ကွန်းဗင်းရှင်း (Convention on Biological Diversity- CBD) သို့ လက်မှတ်ရေးထိုးဝင်ရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့် အညီ နိုင်ငံ၏ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို ကွန်ဗင်းရှင်းသဘောတူညီချက်များ၊ နိုင်ငံအဆင့် မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာတို့နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း အား Sumitomo Corporation Asia and Oceania Pte. Ltd မှ General Manager, Mr. Masateru YAMATO နှင့်အဖွဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံသည့်သတင်း (၁၃-၃-၂၀၁၄)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း အား Sumitomo Corporation Asia and Oceania Pte. Ltd, မှ General Manager, Mr. Masateru YAMATO နှင့်အဖွဲ့သည် ယနေ့ ၁၃-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၄:၄၅ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း အား Indo-Myanmar Chamber of Commerce and Industries(IMCCI) မှ Vice President Mr.A.K. Murarka လာရောက်တွေ့ဆုံသည့်သတင်း (၁၃-၃-၂၀၁၄)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း အား Indo-Myanmar Chamber of Commerce and Industries- IMCCI မှ Vice President Mr.A.K. Murarka သည် ယနေ့ ၁၃-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၄:၀၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်မောင်၊ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးတင်ထွန်း၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာညီညီကျော်၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းလှိုင်တို့ တက်ရောက်ကြသည်။